Aqoonyahan Jamaal Xaaji Cali oo soo dhaweeyay heshiiskii laga gaadhay shaqaaqadii ka dhacdey Buuhoodle. |
Aqoonyahan Jamaal Xaaji Cali oo soo dhaweeyay heshiiskii laga gaadhay shaqaaqadii ka dhacdey Buuhoodle.
Aqoonyahan Jamaal Xaaji Cali Cilmi oo kamid ah Aqoonyahaniita Deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa soo dhaweeyey heshiiskii iyo nabadii laga gaadhay shaqaaqadii beelo Walaalo ah ku dhexmartay magaalada Buuhoodle ee xarunta Gobolka Cayn.
Jamaal Xaaji Cali ayaa dhinaca kale ka hadlay qodobada ay dhawaan soo wada saareen madaxdii hore ee Khaatumo iyo maamulka Somaliland ee ka Dhacay Magaalada Hargaysa isagoo dhinaca kale ugu baaqay beelweynta SSC shir watashi ah.
Cali Dhagjar, Qayder